နှစ်ပွဲဆက် နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပေမယ့် ပေးဆပ်မှုကြီးမားခဲ့တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်ရဲ့နိုင်ပွဲ – Sports Soccer News
နှစ်ပွဲဆက် နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပေမယ့် ပေးဆပ်မှုကြီးမားခဲ့တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်ရဲ့နိုင်ပွဲ
ဂျူဗင်တပ်စ်ဟာ ဒီနေ့ညနေ အစောပိုင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ အီတလီ စီးရီးအေ ပွဲစဉ်အဖြစ် ဆမ်ဒိုရီးယားနဲ့ပွဲမှာ ၃-၂ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ဂျူဗင်တပ်စ်အတွက် ဒီဘားလား၊ ဘိုနူချီနဲ့ လိုကာတယ်လီတို့က ဂိုးတွေသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။
ဒီရာသီ စီးရီးအေမှာ အခြေမလှ ဖြစ်နေရတဲ့ ဂျုဗင်တပ်စ်တို့ ၂ ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ကစားသမားသစ် လိုကာတယ်လီမှာလည်း ဂိုးပေါက်စတင်တွေ့ရှိခဲ့လို့ အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ ပေးဆပ်မှုကလဲ ရှိနေပြန်ပါတယ်။
အဲ့တာကတော့ ဒီပွဲမှာ ဂျူဗင်တပ်စ်အတွက် အဖွင့်ဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီဘားလား ပွဲကစားချိန် ၂၁ မိနစ်မှာပဲ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့် ကူလက်ဗ်စကီးနဲ့ လူစားလဲခဲ့ရပါတယ်။ လူစားလဲခံရချိန်မှာလည်း ဒီဘားလားတစ်ယောက် ငိုကြွေးပြီး ကွင်းထဲက ထွက်သွားတာကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ်စ်ဟာ လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညမှာ ချန်ပီယံလိဂ်အိမ်ကွင်းပွဲစဥ်အဖြစ် ချဲလ်ဆီးကို ဧည့်ခံကစားရမှာဖြစ်ပြီး တိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းနေတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အတွက် ဒီဘားလားရဲ့ ဒဏ်ရာက သတင်းဆိုးဖြစ်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ချဲလ်ဆီးနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်ကိုပါ လွဲချော်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ဟာ ဒီေန႕ညေန အေစာပိုင္းမွာ ကစားခဲ့တဲ့ အီတလီ စီးရီးေအ ပြဲစဥ္အျဖစ္ ဆမ္ဒိုရီးယားနဲ႕ပြဲမွာ ၃-၂ ဂိုးနဲ႕ အနိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အတြက္ ဒီဘားလား၊ ဘိုႏူခ်ီနဲ႕ လိုကာတယ္လီတို႔က ဂိုးေတြသြင္းယူေပးနိုင္ခဲ့တာပါ။
ဒီရာသီ စီးရီးေအမွာ အေျခမလွ ျဖစ္ေနရတဲ့ ဂ်ဳဗင္တပ္စ္တို႔ (၂)ပြဲဆက္ နိုင္ပြဲပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး ကစားသမားသစ္ လိုကာတယ္လီမွာလည္း ဂိုးေပါက္စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့လို႔ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ ႀကီးမားတဲ့ ေပးဆပ္မႈကလဲ ရွိေနျပန္ပါတယ္။
အဲ့တာကေတာ့ ဒီပြဲမွာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အတြက္ အဖြင့္ဂိုးသြင္းယူေပးနိုင္ခဲ့တဲ့ ဒီဘားလား ပြဲကစားခ်ိန္ (၂၁) မိနစ္မွာပဲ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ကူလက္ဗ္စကီးနဲ႕ လူစားလဲခဲ့ရပါတယ္။ လူစားလဲခံရခ်ိန္မွာလည္း ဒီဘားလားတစ္ေယာက္ ငိုေႂကြးၿပီး ကြင္းထဲက ထြက္သြားတာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။
ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ဟာ လာမယ့္ ဗုဒၶဟူးေန႕ညမွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္အျဖစ္ ခ်ဲလ္ဆီးကို ဧည့္ခံကစားရမွာျဖစ္ၿပီး တိုက္စစ္ပိုင္းအားနည္းေနတဲ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အတြက္ ဒီဘားလားရဲ႕ ဒဏ္ရာက သတင္းဆိုးျဖစ္ေစခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္ကိုပါ လြဲေခ်ာ္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။
မှော်ဝင်ဆန်းပြားတဲ့ တော်ဝင်ဂန်းနား ပြန်လာပြီဆိုတာ သက်သေပြခဲ့တဲ့ပွဲ
ဆိုးလ်ရှားနေရာမှာ တူချယ်ဆိုရင် မန်ယူနိုက်တက် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ရနိုင်မည်ဆိုတဲ့ ပေါလ်မာဆင်
မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ရခဲ့ပေမယ့်...
လာမယ့် ရာသီမှာ ကျောနံပါတ်သစ်ကို ပြောင်းလဲ ဝတ်ဆင်မယ့်...
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ချိန်ပါကြီး နှစ်သင်းကို...
အမှုမှာ အနိုင်ရပြီး ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှာ ပြန်လည်...
ယူရိုပါလိဂ် ကန်ရတာခြင်းအတူတူ အပြောင်းအရွေ့မှာ ဂိတ်ထက်...
လိဒ်ကွင်းလယ်လူ ကယ်ဗင်ဖီးလစ်ကို ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု...
Copyright © 2022. Created by Sports Soccer News.